Royse RSI - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Royse RSI
မေ 30, 2018
Welles Wilder ရဲ့ RSI ညွှန်ပြချက်အပေါ်တိုးချဲ့, ပိုကြီးတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းအသုံးပြုရန်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့.
အဆိုပြုထား RSI ၏အဓိကစိတ်ကူးပိုကောင်းမည်သည့်အချိန်အပိုင်းအခြားအတွက်ပိုကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ထောက်လှမ်းဘို့ပိုကြီးတဲ့ကာလကို အသုံးပြု. အချက်ပြ overbought / oversold အခြေအနေများ detect ဖြစ်ပါသည်.
ဒါအတွက်, ငါကပြောင်းလဲမှုတစ်ချို့ သာ. ကွီးမွတျကာလအဘို့အဖြစ်ကောင်းသော performe ခဲ့ပါ, ကဲ့သို့ 120, တစ်အမြတ် variable ကိုမိတ်ဆက်.
ဒါကြောင့်, သင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် 120 မူရင်း Wilder RSI အတွက်ကာလ, သင်တစ်ဦးပုံပြမျဉ်းကိုမြင်ရဖို့အမြတ်အဖြစ်သေးငယ်တဲ့ကာလကိုထိုးသွင်းနိုင်ပါတယ်.
– ကာလ: မူရင်း RSI ကာလ
– အကျိုး: သာ. ကွီးမွတျကာလပိုကောင်း visualization အဘို့အထိုးသွင်းအမြတ်
နမူနာ 1: EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ H1 အတွက် Wilder RSI အမြတ်ဆေးထိုးသုံးပြီးပိုကြီးတဲ့ကာလ၏အားသာချက်
– အဆိုပါဂရပ်ငါတို့သည်နှစ်ခုညွှန်းကိန်းနှိုင်းယှဉ်ပြီ: Wilder RSI (ပြာသော) x က Royse RSI (အနီေရာင်)
– ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ်မှတ် signal ကိုမှတ် detect သာ. ကောင်း၏  နှင့် 
– ကာလနဲ့မူရင်း RSI မှတ်ထားပါ 14 ရမှတ်ကို detect  နှင့်  နီးပါးတူညီကြသည်, ဒါပေမယ့်အချက်များ  နှင့်  အလွန်ကွဲပြားခြားနားကြသည်
– ကာလနှင့်အတူ Figurelli RSI အတွက် 120 နှင့်အမြတ် 10, ကျနော်တို့အချက်များကိုတွေ့နိုင်ပါသည်  နှင့်  ကြောင်းပိုကောင်း signal ကို overbought / oversold အခြေအနေများ detect
နမူနာ 2: EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ D1 အတွက် Wilder RSI အမြတ်ဆေးထိုးသုံးပြီးပိုကြီးတဲ့ကာလ၏အားသာချက်
ဥပမာအဖြစ်အတူတူပင် 1, အဆိုပါဂရပ်ငါတို့သည်နှစ်ခုညွှန်းကိန်းနှိုင်းယှဉ်ပြီ: Wilder RSI (ပြာသော) x က Royse RSI (အနီေရာင်)
– ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ်မှတ် signal ကိုမှတ် detect သာ. ကောင်း၏ ,  နှင့် 
– Wilder RSI အချက်အဘို့သတိပြုပါ  oversold ဖြစ်ပါသည်, Figurelli RSI အမှတ်ရှိနေစဉ်  oversold ဖြစ်ပါသည်
– သငျသညျအကြိုးစီးပှားကိုသုံးနေလျှင် 1 အဆိုပါ Figurelli RSI Wilder RSI ညီမျှပါလိမ့်မည်
– သင်သည်သင်၏ကာလကိုတိုးမြှင့်မယ်ဆိုရင်, အမြတ်လည်းတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်, အဘို့ဤမျှ 120 ကာလသငျသညျအကြိုးစီးပှားကိုကြိုးစားနိုင် 10 ပိုကောင်းပင် သာ. ကြီးမြတ်ကာလအတွင်းအကြီးအ Wilder RSI မြင်ကွင်းကြည့်ရှုရန်
Royse RSI Metatrader ၌တည်ရှိ၏4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Figurelli RSI သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
Figurelli RSI.mq4 install လုပ်နည်း?
Shane RSI.mq4 Download
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှမိတ္တူ Figurelli RSI.mq4 / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
Figurelli RSI.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
indicator Figurelli RSI.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ Figurelli RSI.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးultra - ATR ဦးရေပြား tool ကို
Next ကိုဆောင်းပါးGuppy (ရှည်လျားက Short)